Ragii weeraray Paris oo la ogaaday Dalka ay hubka ka soo iibsadeen iyo Qiimaha ay kala soo baxeen !! |
Ragii weeraray Paris oo la ogaaday Dalka ay hubka ka soo iibsadeen iyo Qiimaha ay kala soo baxeen !!
Ragii dhawaan weerarada kala duwan ku qaaday caasimada dalka Faransiiska ee Paris gaar ahaan xarunta jaraaidka Charlie Hebdo iyo Supermarket-kii Yahuuda leheed ayaa waxaa la soo ogaaday halka ay hubka ka soo iibsadeen iyo qiimaha ay kala soo baxeen.
Booliiska dalka Beljemka gaar ahaan kuwii dhawaan weeraray magaalada Verviers oo ay guryaha ugu dhaceen rag hubeeysan ayaa waxay booliiska dalka Faransiiska ku wargaliyeen in ragii 3-da ahaa ee weerarada ka geystay magaalada Paris ay dhamaan hubka ka soo iibsadaan gudaha dalka Beljamka.
Wiilashii walaalaha ahaa ee weeraray xarunta jaraaidka Charlie Hebdo ayaa waxaa la shaaciyay inay hubka kala soo baxeen lacag lagu sheegay in ka yar 5.000 oo Euro halka Amedy Coulibaly oo dukaankii Yahuuda weeraray uu hubkiisa sidoo kale ka soo iibsaday gudaha dalka Beljemka.